Wadada Tareenka Tareenka ee Trabzon ayaa la dhisay | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Banaadir61 TrabzonWadada Tareenka Tareenka ee Tayada leh ayaa laga dhisay Trabzon
21 / 11 / 2019 61 Trabzon, Asphalt News, GUUD, Gobolka Banaadir, WADADA, TURKEY
Waddo la taaban karo oo tayo leh oo madaarka ah ayaa loo dhisay plateaus
Wadada Tareenka ee Tayada leh ee Tayada leh ayaa loo dhisay buuraha ku teedsan Trabzon; Dawlada Hoose ee Magaalada Trabzon waxay sii wadaysaa howlaheeda iyada oo loo eegayo Mashruuca Yesilyol, kaas oo ujeedadiisu tahay isku xidhka dhulalka sare ee Badda Madow ee Bariga.
Dhismaha wadada la taaban karo ee '11 km' waxaa dhisaya Wadada Erikbeli-Kadırga Plateau Road oo ay sameysay Waaxda Dayactirka iyo Dayactirka Wadada ee Dowlada Hoose. Mitirrada '4'er oo laba jibbaaran oo ballaca ballaadhan oo ah wadada ayaa sidoo kale la dhisay dariiq ballaadhan oo la taaban karo oo ah 1 mitir.
WAA IN AAD MUHIIM AH KU SAABSAN JIMCADA
Duqa Magaalada Caasimadda Trabzon Murat Zorluoğlu ayaa hadal ka soo saaray mowduuca wuxuuna sheegay inay muhiimad gaar ah siinayaan tayada shaqadooda oo dhan. Isagoo tilmaamay inay sameeyeen adeeg waara oo ay sameeyeen shaqo tayo leh iyo shaqooyin joogto ah, Zorluoğlu ayaa yidhi, önce Waxaan markii ugu horreysay xaqiijinay ballaarinta waddooyinka iyo dhismaha darbiyada ku haynta Waddada Tonya-Erikbeli-Kadırga Plateau. Hadda waxaan fulinay shaqada iskuxiranta wadooyinka anagoo ku dhejineyna qalab gaar ah ilaa dhamaadka iyadoo nidaamka lagu isticmaalay isku xirida garoomada diyaaradaha. Waxaan ku darnay dhismaha qaybta harsan ee 11 km oo ka mid ah wadada halkaas oo aan ku dhamaynay shaqooyinkii qaybta 3 km, si loo dhammeystiro muddada soo socota.
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya inay sii wadaan waxqabadyadooda maalgelinta ay siinayaan Maamulka Horumarinta Gobolka Bariga Madow ee Mashruuca Horumarinta (DOKAP) iyo fursadaha maaliyadeed ee Degmooyinka Waaweyn, Duqa magaalada Zorluoğlu wuxuu ku soo gabagabeeyey ereyadiisa sida soo socota: Y waa mashruuc aad u culus oo horumarka ah. Kama furi karno wadooyin cusub xadka Trabzon xadka Yesilyol, waxaan dib u dhis ku sameynaynaa wadooyinka sare ee hada jira iyadoo la raacayo heerarka. Ka sokow wadada Tonya-Erikbeli-Kadırga Plateau, Çaykara Limonsuyu Plateau Road iyo Maçka, 49 km ee Maçka-Ocaklı-Lişer Plateau-Şolma Plateau-I Roadklar Road waxay ka bilaabaneysaa Maçka waxayna ku dhamaaneysaa Işıklar Neighborhood of Akçaabat. Miyaynu ku sii soconnaa. Waxaan sii wadi doonnaa inaan ka shaqeyno 2020 iyo 2021. "
Ogeysiiska Qaadashada: 60 E1 nooca 900A tareenada tayada leh ee la iibsado
Gaadiidka Dadweynaha ee Dheeraadka ah ee Diyaaradda ee Diyarbakır…
Faafinta Trabzon Dhibaatada Gaadiidka
Dhaqanku kuma Jebin Gaadiidka Dadweynaha ee Trabzon Bayram…
Erikbeli Kadır Yay rga Highland Road
Wadada Wadada dheer ee Limonsuyu
Tonya Erikbeli Kadır ga rga Highland Road